Imvana nepepile kunye neetapile | Ukupheka kweKhitshi
UCarmen Guillen | | Cuisine yaseSpain, Ukupheka kwenyama
Iiresiphi apho inyama yegusha sesona sithako siphambili njengokuthi "sithandwa" njengoko "zisaliwe." Kutheni sisitsho nje? Kungenxa yokuba yinyama enencasa ekhethekileyo oyithanda kakhulu okanye ongayithandiyo kwaphela.
Endlini yam sinethamsanqa lokuba phantse wonke umntu uyayithanda kwaye ibisisidlo sethu kule veki iphelileyo. Awudingi izithako ezininzi kwaye zenziwe ngexesha elifutshane. Masithi sisidlo esiqhelekileyo esihamba kakuhle ngexesha lesidlo sasemini ngeCawa, ukuba sonwabele ukuhlangana nosapho lonke.
Ukuba ndikukhuthazile ngokwaneleyo ukuba ungcamle oku kutya kumnandi, qhubeka ufunda eyethu #ummiselo de itakane kunye nepepile kunye neetapile.
Imvana enesipelepele kunye neetapile sisitya esifanelekileyo ukuba usonwabele nosapho lonke. Yisebenzise kule mpelaveki izayo, kwaye undixelele ukuba uyayithanda.
Imilenze emi-4 yegusha
3 iitapile eziphakathi / ezinkulu
Ku isitya se-oveni, sifafaze amazantsi ngentwana ukutshiza ioyile yomnquma. Ukuba awunayo kule fomathi, yongeza amathontsi ambalwa kwaye usasaze nge-napkin yokufunxa.
Emva koko siza kubeka iitapile ezisikiweyo nezixobukile, kunye nentwana ye sal ngasentla kunye ipelepele emnyama.
Ngaphezulu kwezi siza kubeka imilenze yegusha (kule meko bekukho ezi-4), kwaye ngaphezulu kwezi sizakongeza Iwayini emhlophe. Okulandelayo, siya kongeza ityuwa encinci, ipepile emnyama kunye thyme malunga nabo.
Into yokugqibela iya kongeza amanzi athile kwitreyi, malunga ne-150 ml. Olu chukumiso lokugqibela kukuba iitapile ziphume ngakumbi zinamanzi kunye nejusi.
Shiya yonke into eziko kunye neqondo lobushushu le 220 ºC kangangemizuzu engama-20-25, Kuxhomekeka ekubeni uyayithanda inyama yakho engaphekwanga kakuhle okanye ephekwe kakuhle.
Kwaye ulungile! Isitya esilungiselelwe ukunambitha ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi zehlabathi » Cuisine yaseSpain » Imvana nepepile kunye neetapile
Ikeyiki itshizi kunye touch of manchego